ESI WEGHACHITE IPHONE SITE AYTYUNS - ITUNES - 2019
Iweghachite iPad, iPhone ma ọ bụ iPod bụ usoro pụrụ iche nke ga-ehichapụ data njirimara na ntọala, dozie nsogbu na ngwaọrụ, ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, wụnye mbipụta ngwa ngwa ọhụrụ.
Kedu ihe a chọrọ maka mgbake?
1. Kọmputa na ụdị mbipute iTunes;
2. Ngwaọrụ Apple;
3. USB USB mbụ.
Nzọụkwụ 1: Gbanyụọ "Chọta iPhone" ("Chọta iPad")
Ngwaọrụ Apple agaghị ekwe ka ị rụgharịa data ọ bụla ma ọ bụrụ na ọrụ "Chọta iPhone" arụ ọrụ na ntọala. Ya mere, iji malite mweghachi nke iPhone site n'aka Aytüns, ọ dị mkpa iji gbanyụọ ọrụ a na ngwaọrụ n'onwe ya.
Iji mee nke a, mepee ntọala, gaa na mpaghara iCloudwee mepee ihe "Chọta iPad" ("Chọta iPhone").
Gbanwee ịgbanwee mgbagharị na arụ ọrụ na-adịghị arụ ọrụ, wee tinye paswọọdụ site na ID Apple gị.
Nkeji 2: jikọọ ngwaọrụ ma mepụta ndabere
Ọ bụrụ na, mgbe ị weghachitere ngwaọrụ ahụ, ị ​​na-eme atụmatụ ịlọghachite ozi niile na ngwaọrụ ahụ (ma ọ bụ kwaga ngwaọrụ ọhụrụ n'enweghị nsogbu ọ bụla), mgbe ahụ a na-atụ aro ịmepụta ndabere ọhụrụ tupu ịmalite mgbake.
Iji mee nke a, jikọọ ngwaọrụ na kọmputa gị site na iji eriri USB, wee malite iTunes. Na mpịakọta elu nke window iTunes, pịa na thumbnail nke ngwaọrụ na-egosi.
A ga-akpọrọ gị na nchịkọta nhọrọ nke ngwaọrụ gị. Na taabụ "Nyocha" Ị ga-enwe ụzọ abụọ iji chekwaa ndabere: na kọmputa na iCloud. Dee ihe ị chọrọ wee pịa bọtịnụ ahụ. "Mepụta otu ugbu a".
Nkeji 3: Iweghachite ngwaọrụ
Ekem utịt ukpepn̄kpọ emi ẹkpenyenede akpan n̄kpọ - utọ edinam usọbọ.
Na-enweghị ahapụ taabụ "Nyocha"pịa bọtịnụ "Weghachite iPad" ("Naghachi iPhone").
Ị ga-ekwenye na mgbake ngwaọrụ ahụ site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Weghachite ma melite".
Biko rịba ama na na usoro a a ga-ebudata ụdị ngwa ngwa kachasị ọhụrụ na ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdebe usoro nke iOS, mgbe ahụ, usoro maka ịmalite mgbake ga-adịtụ iche.
Esi weghachite ngwaọrụ site na ichekwa mbipute iOS?
Tupu oge eruo, ị ga-achọ ibudata nsụgharị ngwa ngwa ugbu a maka ngwaọrụ gị. N'isiokwu a, anyị anaghị enye njikọ maka ihe onwunwe ebe ị nwere ike ibudata ngwa ngwa ahụ, Otú ọ dị, ịnwere ike ịhụ ha n'onwe gị.
Mgbe a na-ebudata ngwa ngwa na kọmputa, ị nwere ike ịga n'ihu na usoro mgbake. Iji mee nke a, mee mpaghara nke mbụ na nke abụọ akọwapụtara n'elu, wee banye na taabụ "Nchịkọta", jide igodo ahụ Mgbanwe ma pịa bọtịnụ ahụ "Weghachite iPad" ("Naghachi iPhone").
Ngwa Windows Explorer ga-apụta na ihuenyo, bụ nke ị ga-achọ ịhọrọ ngwa ngwa na nbudata maka ngwaọrụ gị.
Usoro mgbake na-ewe na nkezi 15-30 nkeji. Ozugbo o zuchara oke, a ga-eme ka ị gbanwee site na ndabere ma ọ bụ hazie ngwaọrụ dịka ọhụụ.
Anyị nwere olileanya na isiokwu a ga-enyere gị aka, ị wee nwee ike weghachi iPhone gị site na iTunes.